Akusiyo imfihlo ukuthi iphupho kusinika enganakile yethu. Kuzo thina lokukhumbula izenzakalo ezidlule, singena izimo ezingalindelekile kuye nokuthi kungaba ngisho esikhathini esizayo yabo. amaphupho abaningi kungaba lula ukuwuqonda - nje ukuvula le ncwadi iphupho ikhasi elifanele. Kodwa manje incwadi iphupho impela eningi, ngakho incazelo yaleli phupho zingase ekabili.
Thola okungenani icala ezivamile: guy ngokuvamile amaphupho intombi yakhe yangaphambili. Kungani akunjalo? Impendulo elula - it is ayevame ukucabanga kwakhe, edabula imizwa ubudala, it is kakhulu sembelwa umphefumulo. Ngokusobala umuntu aquleke ziwumthwalo uthando lwakhe ngephupho. Kodwa akubona bonke ngakho elula. Ngakho, yini lo owayeyintombi ephusheni?
Ezinye eziqeda amandla abathi: ukubona uthando zakhe zangaphambili ephusheni - emhlanganweni ekuseni kakhulu naye, kodwa empeleni. Ngokuvamile kungase kube uphawu lokuthi intombi ubizwa nangokuthi ecabanga ngawe, angeke uchithe ngokuphelele emihlanganweni yakho. Kodwa iphupho kufanele ihlaziye kakhulu - kungenzeka, kungcono kuwe.
Nostalgic ngothando wangaphambili? Ukuphupha ukuvuselela ubudlelwane yokuqothulwa? Khona-ke ungamangali uma yabonakala ephusheni owayeyintombi. Kuyinto inkumbulo yakho siqu ithumela nomfanekiso waso, ngokuphindaphindiwe, okwenza lokukhumbula izenzakalo we lesengcile kanye ziphuphe aphoyintimenti entsha. Uma dream ukuthi babuyelane, futhi le ntombazane yena babefuna ukubuyela emuva kuwe - lokhu kuwuphawu ezinhle. Phakathi ushiye wezangaphakathi ubuhlobo. Mhlawumbe kubonisani usuku lwangempela futhi kwenzeke lokhu.
Ephusheni, lapho uthando zakho zangaphambili uyakhala ayenakho ezinye uhlobo osenkingeni noma ososizini, kakhulu, kungenzeka efana izenzakalo zangempela. Mhlawumbe umuntu owayeyinkosi seduze kwakho kanye, eqinisweni kwakukhona enkingeni, futhi angizange ngilimale usizo lwakho.
Godu kuthiwani nengabe yakho owayeyintombi itholé iphupho nabanye? Ngaphezu umhawu akho kanye ukulangazelela ke, kungasho ubuhlobo obusha ngawe. Bekezela - futhi cishe, kudingeka ube nothando elisha ulinde wena ikusasa eliqhakazile.
Uma ex yakho kwakuyiphupho "ngendlela umndeni", lokhu kubuye inoveli entsha. Futhi namanje bengayeki ukuqhathanisa umngane wakhe zamanje nalelo wokugcina. Ngesikhathi esifanayo nihlupheka ilukuluku - kanjani eba ukuphila obuseduze?
Ukuze ashade owayeyintombi yakhe ephusheni - ukuze izinguquko ezinkulu ekuphileni kwakhe siqu. Mhlawumbe uzothola ne Lowo ongazange isaziso ngaphambili. Futhi, ubani owazi, mhlawumbe ukuthi iphupho maduze abe ngokoqobo - kodwa nge Heroine ezahlukene.
Uma guys lingama amaphupho ukumela umlayezo subliminal: "Angikwazi ukhohlwe owayeyintombi" ke ukuthi kungasho ukuthi bona wobulili bubuhle? Indlela ukuchaza ukubonakala owayeyintombi ephusheni umfana, umyeni, intombi noma nje nomngane wakhe wakudala?
Ngokuvamile leliphupho ubikezela umhawu enkingeni ngezihluthu siqu. Zonke ngoba unganakile ngisho njalo ukuziqhathanisa yisithunzi kusukela esikhathini esidlule - nowayenguNgqongqoshe. Mhlawumbe sekuyisikhathi uphumule futhi babe ngokwami?
Njengoba for nye nabesifazane asebeneminyaka efanele esikhathini esidlule, ngaquleka, futhi bangakwazi ukuntanta engqondweni yakho: bedle zokuxhumana virtual, ngalokwanele ajwayelekile ubuso, zagcwala emgwaqeni, uzama ukuvuselela oxhumana ubudala futhi wenze oxhumana. Futhi ungakwazi ngokushesha alindele umhlangano uphapheme ngempela.
Kungani iphupho nyoni zafinyelela endlini? Impendulo uzokutshela incwadi iphupho
Theft - ukuthi iphupho, futhi lokho kubonisani?
INdodana ngokuqapha, noma Yini iphupho ukuthi nguphoyizeni wezinyoka?
Sifunda ukuthi iphupho nomhlobiso segolide
Man kwakudingeka bafune okuthile ephusheni - njengoba kuchaziwe kulo mbono?
Izici ubuchwepheshe: Pilewort
Chevrolet Aveo - ezibekiweko lobuchwepheshe hhayi kuphela
Yini sokulala ukulungiselela kithi: yini uyaphupha imililo?
I-window-sill ye-marble ngaphakathi. Imabula yemikhiqizo yemvelo
Liyini ikhambi izilonda kuyinto ziphumelela kakhulu?
I zamakhemikhali ngokomzimba izakhiwo yensimbi
Kungani ngivuka ebusuku? Kungani abantu uvuke ebusuku
Spain elingenamikhono izingalo: umlando kanye ukubaluleka izimpawu isimo